Xogihii Ugu Danbeeyey Ee Dacwadda Baddena & Kenya Oo Sir Cusub... - Wararka Maanta
Home/Caalamka Videos/Xogihii ugu danbeeyey ee Dacwadda Baddena & Kenya oo sir cusub…
Xogihii ugu danbeeyey ee Dacwadda Baddena & Kenya oo sir cusub…
''Hashi Afsoomaali Baddena Caawa Cusub dacwadda Dagaal Danbeeyey Doorashada Dowlada Eng Yaasiin Geeska Afrika HM Hogaamiyaha Horufadhi horufadhi media horufadhi media 2019 horufadhi media today horufadhi media tv horufadhi wararka horufadhi wararkii ugu danbeeyay horufadhi wararkii ugu danbeeyay maanta Horufadhmedia Kenya Maamulka Madaxweynaha Maraykanka maraykanka iyo ruushka Mogadishu'' Muqdisho Salman sir Somali dunida Somalia News Soomaalida TV Ugu Wararka Caalamka Wararkii ugu Danbeeyey Xogihii Yassin
Deg Deg: Xogtii Ugu Dambeysay ee ICJ, MD Farmaajo oo Go'aan Geesnimo leh qaatay...
MSF oo Sheegtay In 70% Xarumihii Caafimaadka Ee Gobolka Tigrayga La Bililiqaystay
Yaasiin Muxumed says:
Maya waayo kooxda isku magacawday midawga mushraxiinta 2 istaydyada kala ah 1 somaliland 2 butland 3 Juba land iyo waliba raga ay ka mid cumar cabdi Rashid Sharif xasan sh.adan iyo kuwa hargaysa kaleh anga maxaa somaaliya naga galay waxa walaalahayo Kenya sida ninka layidhaado Adan c.ciidle ee sheegta inuu wariye yahay dhamaantood waxay raali kayihiin in Kenya Qaddato bada Somalia ilaahay kama aqbalo oo inkaari ha ku dhacdo
zultaan Hondsome says:
Kenya waxay wadaa ku qabso ku qadi mayside oo indha la,aana from somaliland Somalia soomali baa leh🙏🥰🇸🇴🟩⬜🟥
Fartun Jibriil Ali says:
Farmajo guuuuuuuuuuul ciiiidankaguuuuuuuuuuuuuuuuul
Daahir Koronto says:
Asc bahda horufadhi media jwb taydu waa mideeyay inyar ayaan kahadlin mooyee siyaasiyiinta kahashay oo afgobaadsaday waiba aanan xusin dhalceen ama cambaarayn gardarada kanya 1 c/man c/shkuur 2 sheikh Sharif sh axmed 3 xasan sheikh kuwa wali ka aamusan axmed madoobe Danny balse taariikhda ayaa xusi doonta kuwa kahadlidoona natiijada kadib go aanka heeg ICJ marka lgaaro guusha soomaaliya badeeda Ku hanato kanyana iska huleesho eng yaasiin iyo eng xaashi waligay ma arag warbaahin idika wadanisan runtana Ku dhegan anshaxana ilaalisa waana idin taageeraa ilaa janalkiinu uu hawada soogalay hal war IMA dhaafin kudhowaad 4 sano waxyar ayaa kadhiman hadaanan khadanayn idaacad kale xogta dahsoon baan daawadaa waad mahadsantihiin daahir maxamed nuur mogadsho somalia
Cabdixakim Xasan says:
Kenya waxa ku Filan inta joogta banaadir ee maxay leedahay ma 5 soomaaliyeed ayay moodaysaa hadii dagaal dhoco in ay hurdayaan wallaahay in ay guban Nairobi
Ayub Nuur says:
Uma malaynayo inuu siyasiyiinta mideeyey
Balse waanu arki donaa halkuu xal kudambeyo
Jinow Ali says:
I m From somali wanan udhimanaya
abdi mahamud says:
Asc bahada horfadhi mesiya waan idinaslamay
Dhamantiin marka hore raga manta huroraya
Siyasada somaliya wlhi ineysan dad ama dal
Midna dankaleheen lakin waxey dankaleyihiin
Ineey iibsadan dalkan 30 sano dhibatadi
Iska heysato marka Waxan leyahay ilaah
Hanaga qabto ragaan midna somali losoo
Adegsanayo midna lagu leyahay wadanka
Qasa siyasadiisa marka dhaca ka somaliyeed
Dhamaantood waxaad tihiin samileyda siyasada wadankana adinka ayaa iskale
Waxaan idin leeyahay iska celiya cadawga
Raba inuu idin iibsado thanks
Muhumed Hajitubeh says:
maya waayo siyaasiyiinta somalidu waa Danlay ku mucaaridka khaasatan iyo kuwa Xooga ku haysta Jubooyinka oo Cadaystay inayna Somali ahayn
Mahamed Abdi says:
Mahadsanid Mr xashi
subxaana allah says:
Maya maya maya mamideyn siyaasiinta
Celebrity 4u says:
Asc Mr Xaashi,bahda Horufadhi media iyo Shacabka Soomaaliyeed meel walba ad joogtan magaceegu wa Max'ed Deeq su'asha hadii an ka jawaabo Maya sababtoo ah anaga dalkeena Siyaasiyiin maba qabno waxan heysanaa oo Siyaasi u heysanaa kuwa la dhaho Aqristayaal oo wixii shisheeye uso qoraan kaliya ummadda u sheegan lkn ummada ahaan weligeyn mid ayan aheyn
Hodan Rashid says:
Abdulle1 Mohamed1 says:
Siyasinta kama hadlin arinka bada wayo wa kubii ibsaday bada Somalia misna lashaqeya sida cimaradka iyo kenya misna Donayo Burburka Somalia Ayago banestay dhiga umada Somaliyed. Hadana kahortagan hormarka usameyey Mr president Mohammed c abdulahi Farmajo Guul iyo Gobanimo insha Allah
abdikadir haji says:
Haa wey kamideysan yihiin waxa ka hadlay ex md xasan sheikh ex md sheikh sharif CC Shakur inta waa arkayey idacadaha oo sheegayo waa loo mideesan yahay hore aan uga socono
Maya kuma midaysna sababtu waxaytahay waxaajira shisheeye kalkaal
زهره معلم says:
Xasbiya Allah wanical wakiila.
Allaha Kuceliyo waxii sharwato A8im Somaliya Guul iyo Gobanimo in shaa Allah.
Saaalax Xaasan says:
Ama diid amawa hadiidin waa lees baranaa hadaaba adiga nadhaceeyso kuli geen waanu is duugeyna
Anigo Somalia guul u rajeynaya waxa iga su'aal ee hadi parlament Somalia diiday inla meel mariyo heshiiski side ku dhacday inu wasiirku saxiixo? Mise kadib marku saxiixay ayay parlament ka tashten? Haday taas dhacdayna arin lagaso tashan sidu wasiir dhan oo dal matala ula shirtagay xagayna ku maqnayen parlament marku heshiskan dhacay may joojiyana?
Waa run shacabka Soomaaliyeed kiiskani wuu mideeyey lkn siyaasiyiintu way ku kala duwan yihiin sababtuna waxay tahay, siyaasiyiintu waxay noqdeen kuwo Kenya la safan Iyo kuwo kasafan ama ka hor jeeda.
King Iska says:
Arrinta kiinya soo jeedisay waxan u arkaa fursad wayn oo lagaga soo celin karo dhulka ay haysato ee (NFF). Waayo waan difaacayaa macnaheedu waa waan dagaalamayaa ee halala galo dagaal xataa dhulka ay lagaga xoraynayo. Ka horse maxkamada xukunkeeda ha la sugo. Wabilaahi tawfiiq.
Yes waa mideyday because somalida markey cadaw arkaan waaa midoowbaan culture kuudaana sidaaa ah
walalaha kheyrka jecel says:
Haa wey kawa siman yihin siyaasinta iyo mucaradkuma ,waxana kamid ah siyaasiintas ,sheikh shariuf, xasan sheikh xasan iyo qeyree, inta ka aamustane, somali hormar uma raban wana calishood u shaqestayal
nuur garabyare says:
Arrinkani Shacabka wuu mideeyey, Siyaasiyiintuse maba oga qaarkood, qaar ka hadleyna wey jiraan.
Kama midesno wayo carurtoda aya kinya jogan hadi ey xanun sadan kinya loqada cafmd logu qada
Ali Mire says:
Midnimo iyo dhirinaan xoog wadajir ah🇸🇴🇸🇴Somaaliya ha noolaato.
Qoorta ka jara kuwa gumeeysiga nagu soo hogaamiyay 😬😱😢